fat - Synonyms of fat | Antonyms of fat | Definition of fat | Example of fat | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for fat
Top 30 analogous words or synonyms for fat
သံလွင်ဆီ - သံလွင်ဆီ ၂၃ ဂရမ် နေ့ စဉ်ပေးခြင်းဇြင့် နှလုံးသွေးကြော အဆီဖုံးနှင့် နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါအားလျော့ နည်းစေနိုင် ပါတယ် ။ ဒါဟာ သံလွင်ဆီမှာပါတဲ့ monounsaturated fats ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို ကောင်း ကျိုးတွေကို ရရှိဖို့အတွက် သံလွင်ဆီဟာ saturated fat တွေနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်ပြီး သင်တစ်နေ့တာ စားသောက် တဲ့ကယ်လီရီ အရေအတွက်ကိုလည်း မများစေပါဘူး ။
Skate punk ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Blink-182 သည် mainstream အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် Blink-182 The Mark, Tom and Travis Show (The Enema Strikes Back!) album ထွက်ရှိခဲ့သည်။ album သည် ထွက်ထွက်ပြီး ပထမအပတ်တွင် အနည်းဆုံး ၁၁၀၀၀၀အချပ်ရေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် RIAA မှ ချီးမြှင့်သော ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ထူးခြားသူသည် studio track မှာ Man Overboard ဖြစ်သည်။ Man Overboard သည် Billboard ၏ Modern Rock Track သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ်၂နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Billboard ၏ Bubbling Under Hot 100 singles သီချင်းစာရင်းတွင် ၁၇ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ နိုဝင်ဘာတွင် The Offspring ၏ "Conspiracy of one" album ထွက်ရှိခဲ့သည်။ album ထွက်ပြီး ရက် ၃၀ အတွင်းတွင် RIAA မှ ချီးမြှင့်သော platinum ဆုရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ဇွန်လတွင် Blink -182 album "Take off Your Pants and Jacket" ထွက်ရှိခဲ့သည်။ album သည် Billboard 200 သီချင်းစာရင်း Canadian album သီချင်းစာရင်းနှင့် Top Internet album သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ်တစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ "Take off Your Pants and Jacket" သည် ထွက်ထွက်ချင်းတစ်ပတ်အတွင်းတွင် အနည်းဆုံး ၃၅၀၀၀၀အချပ်ရေ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်မေလတွင် platinum ဆုရရှိခဲ့သည်။ ကနေဒါ skate punk တီးဝိုင်း Sum 41 သည် ၂၀၀၀ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် mainstream သို့ ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ Fat lip သီချင်းသည် Billboard Hot 100 သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ် ၆၆နေရာနှင့် Modern Rock Track သီချင်းစာရင်းတွင် နံပါတ်၁နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Fat Lip သည် Total Request live (တီဗီစီးရီး) တွင် လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ Fat Lip သီချင်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် RIAA မှ platinum ဆုရရှိခဲ့သည်။ All Killer No Killer album သည် Music Canada မှချီးမြှင့်သော platinum ဆုရရှိခဲ့သည်။
Pop punk pop punk သည် အမေရိကန်တွင် ၁၉၈၀တွင် စတင်၍ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ Dag Nasty နှင့် All တီးဝိုင်းတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် record label များက အမျိုးအစားသည် စီးပွားရေးအရ အလားအလာမရှိဟု ယူဆခဲ့သည်။ တီးဝိုင်းများ Bad Religion, Descendents နှင့် The Vandals စသောတီးဝိုင်းများသည် The Offspring (1984) နှင့် Green Day(၁၉၈၇) တီးဝိုင်းများကို ပုံသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ mainstream တွင်နှစ်အနည်းကြာ ကျော်ကြားအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ pop punk တီးဝိုင်းများသည် do it yourself (DIY) ကို သူတို့၏ဂီတထဲသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်အတောအတွင်းတွင် independent record label များအများစုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ သူတို့၏ဂီတကို အမှတ်ရစရာအောင်မြင်မှုများ ၂၉၉၀တွင် စီးပွားရေး အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။ Epitaph Records (၁၉၈၇)၊ Lookout Records (၁၉၈၇) နှင့် Fat Wreck Chords (၁၉၉၀) စသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀နှင့် ၁၉၉၀အတောအတွင်းတွင် pop punk တီးဝိုင်းများသည် The Queers, The Mr.T Experience, Jawbreaker နှင့် Screeching Wease စသော တီးဝိုင်းများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများသည် Lookout Records တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Green Day လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် While the end of World War II caused production of the B-29 to be phased out, with the last example completed by Boeing's Renton factory on 28 May 1946, and with many aircraft sent for storage and ultimately scrapping as surplus to requirements, the remaining B-29s formed the combat equipment of Strategic Air Command when it formed on 21 March 1946. In particular, the "Silverplate" modified aircraft of the 509th Composite Group remained the only aircraft capable of delivering the atomic bomb, and so the unit was involved in the Operation Crossroads series of tests, with B-29 "Dave's Dream" droppinga"Fat Man"-type bomb in Test "Able" on 1 July 1946.